IHuawei ityhila ukuba zeziphi iifowuni eziza kuba ne-Android Q ngokusemthethweni | I-Androidsis
IHuawei okwangoku ihlupheke ngenxa yokuvalwa kwe-US, ethatha a ukwehla okukhulu kwintengiso nakumvuzo wakho. Ngaphandle kokucinga ukuba uphawu lwaseTshayina aluyi kuba nakho ukuhlaziya iifowuni zalo kwi-Android. Ngaphandle koku, kungekudala kakhulu iindaba ezothusayo ezothuse wonke umntu. Ukusukela uluhlu lweefowuni zohlobo lwesiTshayina olo Baza kuba nohlaziyo kwi-Android Q. Into ephakamisa zonke iintlobo zokuqikelela.
Nangona yathathelwa ingqalelo into yokuba yayiyindumasi, eqinisekisiweyo ngoku. Kuba yiHuawei uqobo etyhila oko Uluhlu lweefowuni zakho ezili-17 eziza kuba nohlaziyo kwi-Android Q. Ibe njalo Ulwahlulo lwesiNgesi lophawu lwesiTshayina eqinisekisile ezi ndaba sele.
Ke oku kulindeleke Uluhlu lweefowuni zeHuawei eziza kuba ne-Android Q ngaxa lithile. Umbuzo ngowokuba bazokwazi na ukuhlaziya okanye ukuba kukho isivumelwano esiqhubekayo, esingasazi yonke into ngaso. Ngayiphi na imeko, uphawu lwaseTshayina lusishiya sinamagama ali-17 kwikhathalogu yalo, ethi ilandelayo:
Umlingani 20 Pro
Uyilo lwe-PORSCHE Mate 20 RS
IP Smart + 2019
IHuawei P Smart Z
Umlingani 20 X
Umlingani 20 X (5G)
Umlingani 10 Pro
UYILO LWESIKOLO UMlingane 10
Umlingani 20 Lite
Siyabona ukuba uninzi lweefowuni ezikolu luhlu Tshatisa ezo sizibonileyo kule ndawo ivuza kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Isiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina, ezinye iimodeli zepremiyamu yaphakathi noluhlu kunye neemodeli ezimbalwa ezivela kuluhlu lwaphakathi. Intwana yayo yonke into kolu luhlu lweHuawei.
Kuya kufuneka silinde jonga ukuba banalo ukufikelela kolu hlaziyo kwi-Android Q okanye hayi. Ngaphandle kwamathandabuzo, uninzi lwabasebenzisi balindele ukuba oku kube njalo, ukuze babenakho ukusebenzisa ifowuni yabo yeHuawei njengesiqhelo ngalo lonke ixesha. Ukongeza ekubeni ukwazi ukonwabela zonke iindaba zokuba inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza iyakusishiya kule meko. Ucinga ntoni ngayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei iqinisekisa ukuba iifowuni ezili-17 ziya kuba ne-Android Q
I-LG W10 iyavela kwiShishini le-Android kwaye ngakumbi ukubalula kwayo kuyatyhilwa